Imivuzo Yomsebenzi We-Tiger (Inqaku: LiyiLoti)
I-Tiger Woods yenza imali eninzi kwimidlalo yakhe yokudlala i-golf tournaments. Uyenze ngakumbi nangokwemvume, ukubonakala, ishishini lakhe legalufu kunye neminye imithombo. Iyiphi iphelele? Uphakame kangakanani umvuzo wePlanga?
Umvuzo ophezulu kakhulu weThuthi uphumelele kwiibhiliyoni zeedola ngoku. Kwaye ngaphaya kwe-90-pesenti ye-Woods yokufumana ubomi kwimivuzo yenziwe kwinqanaba legalufa , kunokuba iphumelele kwimikhosi.
Igalelo leNkcazo yeNkonzo yokuTyelelo lwePGA yeTiger Woods
I-Woods inqobile imali eninzi ngokuphumelela i-PGA Tour tournaments. Ubeka okwesibini ixesha lonke ekuphumeleleni kweso sikhenketho. I-Woods iphumelele kangangokuba i-$ 10.6 yezigidi ngezihlandlo enye, kwaye iholele ityelelo kwimali kwiirekhodi ezili-10 ezahlukileyo (kwaye yayimgijimi kwezinye izihlandlo ezintathu). Imali yemivuzo yonyaka ihlala ikhulu. Sekunjalo, i-PGA Tour winnings akhawunti engaphantsi kwengu-10-pesenti ye-Tiger yexesha elipheleleyo lemali yokufumana imali.
Umvuzo we-Woods kwi- PGA Tour yaphela, ekupheleni kwexesha le-2017, i-$ 110 yezigidi. Ingeniso yemali kaTiger yayingama-110,061,012 kwi-PGA Tour, ukususela ngeli xesha eguqulela iprojekti ngohlobo lwe-1996 ukuya ekupheleni kuka-2017. Ngo-2016-17, i-Woods yathola iidola ezingama-dollar idlala igalofu ngenxa yokulimala. Kodwa ngowama-2018, ubuyele kwikhosi kwaye wongezelela kwisixa sakhe.
Hlalani nikhumbula ingqikithi yezigidi eziyi-110 ezingama-$ ayiziphendulele kwiimpumelelo zemiqhudelwano ngaphandle kwePGA Tour.
Ngoko ixabiso elibandakanya zonke iindwendwe ezithatha umdlalo zibulela ngokubambisana nakwezinye iindwendwe, kunye neziganeko ezingabonakaliyo njenge-Woods ' Hero Hero World Challenge kwaye, ekuqaleni kwesikhundla sakhe, iMidlalo yeMidlalo .
Umsebenzi weTiger Woods Uthotho lweNkundla
Imali engakanani i-Woods eyayifumana kwimithombo engenayo yokufumana imali?
Ngaphandle kokuba i-preparer tax tax ye-Tiger, akukho mntu unokuthetha ngokuqinisekileyo. Kodwa ngaphezu kweminyaka i- Golf Digest ilandele inzuzo ye-Woods kwi-and-off-course. Yaye ngokwelo phephancwadi, ingeniso ye-Woods off-course, ngo-2016, ihlala kwi-$ 1.344 yezigidigidi .
Imali engenayo ye-off-course ithetha iintlawulo kwi-Woods ngaphandle kwexabiso lomvuzo elithotyelwayo ngokugqitywa kwii-tournaments. Inxalenye enkulu yolu ngeniso yi- Woods 'endorsement isebenzisana neemveliso ezinkulu kunye nenkampani . Kodwa iquka izinto ezifana neengeniso ezivela kwishishini lakhe loyilo lwegalufa kunye nawuphi na umsebenzi oshishino; ngeniso; iimali zokubonakala njalo njalo.
Ingqungquthela eseleyo: I-Tiger's Lifetime Revenue
Imali engenayo ye-Woods, kubandakanywa kokubili kwi-course kunye ne-off-course earnings, kunye nokusebenzisa isibalo seGolest Digest yesibalo esingekho, i-$ 1.45 yezigidigidi- $ 1,454,539,473, ukuba ibe yinto echanekileyo. Lo ngumfanekiso wemali engenayo; Umthamo weThuthi uza kuba phantsi ngenxa yeendleko kunye nentlawulo, phakathi kwezinye izinto.
Ingxelo yeNgqikembe kaDonald Trump